Cameron.....: August 2013
အာလူးနဲ့တခြားအသီးများချေဖို့ နဲ့ မုန့်ကော်တဲ့ ဂေါ်ပြား
ကြော်ပြီးသားမုန့်တွေ အသားတွေကိုဆီစစ်တဲ့ဇကာနဲ့ ဖုတ်ပြီးသားမုန့်တွေအအေးခံတဲ့ ဇကာ
ရောင်စုံကော်ပန်းကန်ပြား၊ ပန်းကန်လုံးနဲ့ ဇွန်းခရင်းဗူး
ချာပါတီ ခေါက်မုန့် Tortilla crepe စတဲ့ ခေါက်မုန့်ပေါင်းစုံလုပ်လို့ရတယ်
ဒီပုံကစပြီး အောက်ကပုံတွေအကုန်လုံးက Food & Art ဖဘကမလာတဲ့ ပုံလေးတွေပါ
Posted by coral nyo at 01:266comments:
Posted by coral nyo at 05:37 17 comments:
ဘ၀မှာ သူစိမ်းယောက်ျားတစ်ယောက်နဲ့ ရင်းနှီးကျွမ်းဝင်ပတ်သက်မှုမရှိခဲ့တာ ဆယ့်ငါးနှစ်ကျော်ကြာခဲ့ပြီ။ လွန်ခဲ့တဲ့ဆယ့်ငါးနှစ်တုန်းကပတ်သက်မှုဆိုတာ သူငယ်ချင်းလည်းဖြစ် ရည်းစားလည်းဖြစ်ခဲ့ဖူးတဲ့ယောင်္ကျား တစ်ယောက်ပါ...။ နောက်တော့ သူလဲ နိုင်ငံခြားထွက်သွား ဟိုမှာ အိမ်ထောင်ကျသွားတော့ ဇာတ်လမ်းက အဲမှာတင်ပြီးသွားခဲ့တယ်...။
ကျွန်မနဲ့ဆယ်နှစ်လောက်ကွာတဲ့ အသက်အစိတ်အရွယ် ကျွန်မနဘေးက ကောင်လေး ...။ သူလဲ ကျွန်မလိုပဲခံစားနေရမလား...။ ခရီးအတူသာထွက်လာရတာ စိတ်ထဲတော့တစ်မျိုးပဲ.... ရှိုးတိုးရှန့်တန့်ပဲဖြစ်နေမလား...။ ဒါမှမဟုတ် ဒီဖက်သူတို့ခေတ်တွေမှာ ဒီလိုကိစ္စမျိုးဟာ လောကနိယာမတရားထဲက တစ်ခုလို့ပဲ စိတ်ပေါ့ပါးစွာတွက်ထားမလားမပြောတတ်....။ ကျွန်မကတော့ သူစိမ်းယောကျားတစ်ယောက် အရေးတွေးပူမိပေမယ့်လည်း ဘာမှန်းမသိသေးတဲ့ ကျွန်မရင်သွေးလေး အတွက်ပြေးမြင်မိပြန်တော့လည်း ကျန်တာအားလုံးဖွဲနဲ့ဆန်ကွဲဖြစ်ဖြစ် သွားတယ်...။
တကယ်တော့ ကျွန်မရဲ့ ရူးသွပ်မှုကို ဘယ်သူကမှ တားဆီးပိတ်ပင်မရတော့လို့ ကျွန်မကိုပြောမရ ဆိုမရတော့လို ဒီခရီးကိုလွှတ်လိုက်ကြတာပါ.....။ ကျွန်မရဲ့ လုပ်ရပ်ကိုမှန်တယ်လို့ တစ်ယောက်မှ မထောက်ခံကြပေမယ့် ကျွန်မကတော့ ကျွန်မဆီရောက်လာမယ့် အနာဂတ်ရင်သွေးကလေးကို မြင်ယောင်ပြီး ကိုယ့်ဘာသာတစ်ယောက်တည်း ကိုယ့်ယုံကြည်ချက်နဲ့ ခရီးဆက်ခဲ့တယ်....။ ကျွန်မဆုံးဖြတ်ချက်ဟာ အမှားတစ်ခုဖြစ်နေရင်တောင်မှ ဒီကလေးလေးအတွက် လောကကြီးထဲမှာ ဘာမဆို ကျွန်မရင်ဆိုင်နိုင်တယ်......။
ကျွန်မအစ်မတစ်ဝမ်းကွဲကပြောတယ် “ဒါနဲ့များအေ...ညည်းကလဲ ယောက်ျားတစ်ယောက်ယူလိုက်ပေါ့ အလွယ်လေးကို”တဲ့....။ ဟင့်အင်း ကျွန်မက အိမ်ထောင်ပြုချင်တာမှမဟုတ်တာ ... ယောင်္ကျားတစ်ယောက်ရဲ့ ဝေယျာဝိစ္စအသေးစိပ်ကို အချိန်ကုန်ခံပြီး ကျွန်မမလုပ်ပေးနိုင်ဘူး...။ ကျွန်မဘ၀ကို သူတို့လက်ထဲ လက်တိုလက်တောင်းလုပ်ပေးဖို့ပုံအပ်မထားနိုင်ဘူး...။ ကဲကျွန်မအတွေးအခေါ်တွေဘယ်လောက် ဂွကျလိုက်သလဲ ....။ ခက်တာက ယောကျာင်္တစ်ယောက်ဟာ မိန်းမတစ်ယောက်အတွက် သူ့ဘ၀အတွက် ကာကွယ်အုပ်မိုးပေးနိုင်တဲ့ အလုံခြုံဆုံးနေရာတစ်ခုလို့ ကျွန်မလုံးဝလက်မခံနိုင်တာပါပဲ...။ တွေ့ဖူးခဲ့သမျှတွေကလဲ တကယ့်အာဂတွေ ခြံခုန်တတ်တဲ့ သစ္စာမရှိတဲ့သူချည်းဆိုတော့ ကျွန်မအားလုံးကို ၀ါးလုံးနဲ့ရမ်းတယ် ထင်ချင်လဲထင်ပါ... မိန်းမ၀ါဒီတစ်ယောက်လို့လဲ စွပ်စွဲနိုင်ပါတယ်....။
ဒါဖြင့် ကျွန်မရင်သွေးလေးကို မိစုံဖစုံကလေးတစ်ယောက်ဘ၀မဖြစ်အောင်လုပ်နေတာလို့မြင်ကြမယ် ...။ ပတ်ဝန်းကျင်က ကဲ့ရဲ့ရှုံ့ချကြမယ်....။ အဖေမဖော်နိုင်တဲ့ကလေးကိုမွေးတယ်လို့ပြောကြဆိုကြမယ်...။ ရတယ် ကြိုက်သလိုပြောပါ ကျွန်မခံနိုင်ရည်ရှိတယ်...။ ဖြစ်လာမယ့် ပြသနာ အစစအရာရာကို ကျွန်မခါးစည်းခံနိုင်လို့ ကျွန်မဒီလမ်းကိုရွေးလိုက်တာ....။ ဒါပေမယ့် ကလေးတစ်ယောက်ဖြစ်လာဖို့ ရင်သွေးကလေးဖြစ်လာဖို့ဆိုတာ ကျွန်မတစ်ယောက်တည်းနဲ့တော့မရဘူးဆိုတာ သိတာပေါ့...။ ကျွန်မ သူငယ်ချင်းမိတ်ဆွေတွေကို ဒီကိစ္စအမြဲပြောပြောတတ်တယ် ...။ “ငါ ဆင်ဂယ်မားသားလုပ်ချင်တယ်” သူတို့က အစကတော့ ကျွန်မကို အပြောင်အပျက်ပြောတယ်ပဲမှတ်ကြတာ....။ နောက်တဖြေးဖြေးနဲ့မှ ကျွန်မကို စီးရီးယက်ဖြစ်မှန်း သူတို့သိလိုက်တော့ ကျွန်မကို မဖြစ်နိုင်တာမလုပ်ချင်စမ်းပါနဲ့လို့ တားကြတယ်...။
ကျွန်မနဲ့ အရမ်းရင်းနှီးချစ်ခင်တဲ့ ငယ်သူငယ်ချင်းတစ်ယောက်က သူ့မောင်လေးရဲ့ သူငယ်ချင်းတစ်ယောက်နဲ့တွေ့ပေးပါတယ်....။ အဲဒီကောင်လေးက ညီအစ်ကိုသုံးယောက်ထဲက အငယ်ဆုံးတဲ့...။ သူ့အစ်ကိုတွေကတော့ အိမ်ထောင်ကျကုန်ပြီ...။ အသက်က နှစ်ဆယ့်ငါးနှစ် မျိုးရိုးကောင်းတယ် ပညာတတ်တယ် ဥာဏ်ကောင်းတယ် စိတ်ကောင်းရှိတယ် လိမ္မာယဉ်ကျေးတယ်.... လောလောဆယ် နိုင်ငံခြားမှာ ကျောင်းတက်ပြီးခဏပြန်လာတာတဲ့...။ သူတို့ပြောပြတဲ့ အချက်အလက်အရတော့ စိတ်ဝင်စားစရာပါ....။ ကျွန်မတွေ့ကြည့်လိုက်တယ်...။ ကျွန်မရဲ့ ရည်ရွယ်ချက်ကိုပြောပြထားတော့ သူသိပြီးသားတဲ့...။
“တို့ကို ဘယ်လိုမိန်းမမျိုးလို့ မင်းထင်လဲ?? ဘာကြောင့် တို့ဖြစ်ချင်တာကို ကူညီပေးဖို့ ဆုံးဖြတ်လိုက်သလဲ??”
“ရိုးရိုးလေးပါ.... အစ်မကို လောကထဲရာက်လာမယ့် လူသားတစ်ယောက်အတွက် ရာခိုင်နှုန်းပြည့် မိခင်ကောင်းတစ်ယောက်ဖြစ်မယ်ဆိုတာ ယုံကြည်လို့ ကျွန်တော်ကူညီလိုက်တာပါ...”
ကျွန်မမေးတဲ့ မေးခွန်းနှစ်ခုကို သူကအဲလိုလေး ပေါင်းဖြေသွားတယ်...။ မဆိုးပါဘူး...။ ဒါပေမယ့် ကျွန်မတို့ ကြားမှာ သဘောတူညီမှုတွေ ကတိက၀တ်တွေလိုအပ်သေးတယ်....။
ကျွန်မတို့ဆီမှာ တိုးတက်ခေတ်မှီတဲ့နိုင်ငံတွေလို ဆင်ဂယ်မားသားဖြစ်ချင်တိုင်း Sperm Bank မှာကိုယ့်စိတ်ကြိုက် မျိုးဗီဇကို ရွေးချယ်ဝယ်ယူလို့မရပါဘူး....။ သူက သူ့မျိုးဗီဇကို စေတနာသက်သက်နဲ့လှူမှာတဲ့...။ ဒါကြောင့် ကျွန်မတို့ရဲ့ သဘောတူညီမှု စာချုပ်ထဲမှာ ငွေကြေးကိစ္စမပါပါဘူး...။
အစကတော့ ဒီကိစ္စကို မေမေနဲ့တိုင်ပင်မလို့ပဲ ဒါပေမယ့် ဘယ်လိုမှသဘောတူမှာ မဟုတ်တဲ့အတွက် နောက်ဆုံး....ကျွန်မငရဲကြီးခံပြီးမေမေ့ကို လိမ်ညာရတော့တာပေါ့....။ ကျွန်မအလုပ်က နိုင်ငံခြားမှာ နှစ်နှစ်လောက် သင်တန်းသွားတက်ဖို့လွတ်တယ်ဆိုပြီးတော့လေ...။
ကျွန်မ..ဥာဏ်မင်းခဆိုတဲ့ လူငယ်လေးတစ်ယောက်နဲ့ တောင်ပေါ်မြို့ကလေးတစ်မြို့ကို baby making အတွက် ခရီးအတူထွက်လာကြတယ်....။ စိတ်ထဲမှာ ပျားရည်ဆမ်းခရီးတစ်ခုကို ကိုယ့်ချစ်သူနဲ့အတူထွက်လာတာလို့ သွင်းထားရမယ်လို့ ကျွန်မသူငယ်ချင်းက သေချာမှာလိုက်သေး...။ အင်းလေ လောလောဆယ်တော့ တရားဥပဒေအရ ကျွန်မနဲ့သူက တရားဝင်လင်မယားအဖြစ် စာရွက်ပေါ်မှာ အသိသက်သေတွေနဲ့ လက်မှတ်ထိုးထားပြီးခဲ့ပြီလေ....။ ဒါပေမယ့် ကျွန်မတို့နှစ်ယောက်တည်း ချုပ်ဆိုကြတဲ့ စာရွက်တစ်ခုပေါ်မှာတော့ ကျွန်မလိုချင်တဲ့ ကတိအချက်အလက်တွေ ထည့်ထားတယ်...သူကိုယ်တိုင်လဲ လက်ခံသဘောတူလို့ လက်မှတ်ထိုးထားပါတယ်...။ သူကျောင်းပြန်သွားမတက်ခင် ခြောက်လအတွင်းမှာ ကျွန်မတို့ ရင်သွေးလေးတစ်ယောက်ရဖို့ကြိုးစားရမယ်....။ ကျွန်မဆီမှာရင်သွေးတကယ်ရပြီဆိုမှ သူနဲ့ကျွန်မကွာရှင်းစာချုပ်မှာ လက်မှတ်ပြန်ထိုးကြမယ်....။ အဲဒီနောက်ပိုင်း ကျမနဲ့လုံးဝပတ်သက်မှုမရှိရ....။ ဒီခြောက်လမှာတော့ သူနဲ့ကျွန်မ သိပ်ကိုချစ်ကြတဲ့ ချစ်သူလင်မယားတွေလိုနေရမှာလေ....။ တကယ်စိတ်ထဲမပါဘဲ အချစ်ကိုဖန်တီးယူရမှာ သိပ်ကို စွန့်စားရာကျမှန်းလည်းသိပါတယ်...။
ကျွန်မတို့စီးလာတဲ့ကားက ညနေစာကို ထမင်းဆိုင်တန်းမှာခဏရပ်နားဖို့ရောက်နေပြီ....။ ခရီးသွားယာဉ်တွေက တသီတတန်းကြီး....ပါကင်မှာ အစီအရီရပ်လို့...။ ခရီးသည်တွေ အလျှိုအလျှိုကားပေါ်ကဆင်းကြတယ်...။ ကျွန်မတို့က နောက်ဆုံးမှဆင်းတယ်...။ ကားပေါ်ကအဆင်း.... သူက အရင်အောက်ရောက်ပြီး ကျွန်မကိုလက်ကမ်းပေးတော့ ကျွန်မကြောင်အမ်းအမ်းဖြစ်သွားရတယ်...။ ကျွန်မသူ့ကိုလှမ်းကြည့်တော့ သူက ပခုံးလေးတွ့န်ပြီး လက်ကိုရှေ့တိုးပြီး ကမ်းတယ်...။ အမျိုးသမီးတွေကို ပထမဦးစားပေး lady first ဆိုတဲ့ အနောက်တိုင်းရဲ့ကောင်းတဲ့ အမူအကျင့်လေးတစ်ခု...။ ကျွန်မသူ့ရဲ့ ကျယ်ပြန့်တဲ့ လက်ဖ၀ါးထဲကို လက်ပြန်ကမ်းပေးလိုက်တယ်...။ ထမင်းဆိုင်တန်းလေးထဲဝင်သွားတဲ့အထိ ကျွန်မလက်ကို သူဆုတ်ကိုင်ထားဆဲ...။ ပထမ..... ကျမ သူ့လက်ဆီက နွေးထွေးမှုကိုခံစားလိုက်ရတယ်...နောက်တော့ ဘာမှန်းခွဲခြားမရတဲ့ အားအင်တစ်ခု ကျွန်မခန္ဓာကိုယ်ထဲကို စီးဝင်သွားတယ်....။ ခြောက်ပေအရပ်ရှိတဲ့ သူ့ဘေးမှာ ကျွန်မခေါင်းလေးက သူ့ပခုံးနဲ့တပြေးညီမှာ....။
“အင်း...ကောင်းသားပဲ...တို့လက်ဆေးချင်သေးတယ်” ကျွန်မအဲလိုပြောလိုက်တာကို သူအဓိပ္ပါယ်ကောက်လွဲ သွားပုံရပါတယ်...။ တွဲထားတဲ့ ကျွန်မလက်ဆီကို ခဏအကြည့်ရောက်ပြီး လွှတ်ပေးလိုက်တယ်...။ ကျွန်မတို့ ထမင်းဆိုင်ရဲ့ အနောက်ဖက်ကိုဝင်သွားလိုက်တယ်...။ အနောက်မှာခရီးသည်တွေများလို့ တန်းစီနေရသေးတယ်။ ကျွန်မပြန်ထွက်လာတော့ အပြင်ဖက်မှာ သူရပ်စောင့်နေတာတွေ့လိုက်တယ်...။
ကျွန်မတို့ ညနေစာကို မြန်မာစာပဲမှာစားလိုက်တယ်.....။ ကျွန်မအကြိုက်ကိုပဲ သူလိုက်စားတာလား ဒါမှမဟုတ် ကျွန်မနဲ့ပဲ အကြိုက်တူလို့လားဆိုတာ သူကိုယ်တိုင်ပဲသိလိမ့်မယ်...။ ကျွန်မတို့ ကြက်ကြော် ချဉ်ဘောင်ကြော်နဲ့ ဟင်းခါးရယ် အခြားအရံဟင်းတွေ အတို့အမြှုပ်တွေကတော့ သူတို့လာချပေးတာစားကြတယ်...။ ပြီးတော့ ကျွန်မကိုဦးစားပေးပြီး ဟင်းတွေကိုခတ်ထည့်ပေးသေးတယ်... ကျွန်မက သူ့ထက်အသက်ပိုကြီးလို့ ဦးချတာလား...။ အို...ကျွန်မ ဘာလို့ အပိုတွေကို သိချင်နေမလဲ...။ သူနဲ့ကျွန်မဆိုတာ တချိန်ချိန်မှာ အတူရှိမနေရတော့မယ့် သူတွေဆိုတာ ကျွန်မကိုယ်ကျွန်မ အမြဲသတိပေးနေရမယ်လေ...။ သံယောဇဉ် မတွယ်မိဖို့ သူ့အပြုအမူတွေပေါ်မှာ မသာယာမိစေဖို့ပေ့ါ..။
ထမင်းစားပြီး ခရီးဆက်ဖို့ ကားတာဝန်ကျသူက ထမင်းဆိုင်ထဲကခရီးသည်တွေကို ကားနံပါတ်နဲ့ လာမခေါ်ခင် ကျွန်မတို့ ဆိုင်အပြင်ဖက်မှာ လမ်းလျှောက်ရင်းစကားပြောဖြစ်ကြတယ်...။
“ဒါနဲ့ မင်းက အိမ်ကိုဒီခရီးထွက်ဖို့ ဘယ်လိုပြောခဲ့လဲ”
“ကျောင်းက စာတမ်းအတွက် ခရီးထွက်ရမယ်ဆိုပြီးလစ်လာတာဗျ”
သူ့အသံလေးရွှင်ပျနေတာကိုကြားရရုံနဲ့ ကျွန်မဘေးက သူ့ကိုလှည့်မကြည့်ဖြစ်ပေမယ့် သူ့မျက်နှာလေးပြုံးနေ လိမ့်မယ်လို့ ကျွန်မခန့်မှန်းမိလိုက်တယ်...။ သူက သူ့အိတ်ထဲက chewing gem တစ်ခု ကျွန်မကိုပေးတယ်....။
နွေဦးလေက အေးလိုက်ပူလိုက်နဲ့ တိုက်ခတ်နေတယ်....။ ကျွန်မတို့ သွားနေမယ့် တောင်ပေါ်မြို့လေးက ဒီရာသီနဲ့ဆို သိပ်နေလို့ကောင်းမှာ...ပူလဲမပူ အေးလဲမအေးဘူးလေ...။ သူငယ်ချင်းက အဲဒီမြို့က သူ့အိမ်ခြံမှာသွားနေဖို့အထိကို ကူညီထားတာ...။
ညသန်းခေါင်ကျော်တော့ ကားလေအေးစက်ကပိုပိုအေးလာတယ်...။ ကျွန်မကလဲနွေဆိုပြီး အနွေးထည်ကို အပြင်ထုတ်မထားမိဘူး...။ ပါလာတဲ့ ချည်ပုဝါပါးလေးကိုပဲ ခြုံထားလိုက်တော့တယ်...။ ကျွန်မက ပြူတင်းပေါက်ဖက်မှာထိုင်တာ သူက လမ်းလျှောက်တန်းဖက်မှာ...။ သူ့ကိုလှည့်ကြည့်တော့ ဂျာကင်အပါးလေးဝတ်ပြီး လက်ပိုက်မျက်စိမှိတ်ထားတယ် ...။ သူအိပ်ပျော်နေရောပေါ့...။ ကျွန်မနားကျပ်ကို နားထဲထည့်ပြီး ပြူတင်းပေါက်ဖက်လှည့်ပြီးမျက်စိမှိတ်ထားလိုက်တယ်...။
ကျွန်မမှေးခနဲအိပ်ပျော်သွားသလား.... ကိုယ်ပေါ်ကိုတခုခုလာထိတယ်ခံစားမိလို့ မျက်စိဖွင့်ကြည့်တော့ သူက ကျွန်မကို သူ့ဂျာကင်နဲ့လာခြုံပေးနေတာ...။
“အစ်မ အရမ်းချမ်းနေတာကျွန်တော်သိပါတယ် ခြုံထားလိုက်ပါ ကျွန်တော်က ဒီအအေးလောက်တော့ ရတယ် အေးဆေးပဲ.... ကျွန်တော်ကျောင်းသွားတက်တဲ့မြို့ဆို ရေတွေဘာတွေတောင်ခဲတာဗျ”
“ဟဟ အစ်မက အဲဒီစကားလုံးကိုနားလည်သားပဲ”
သူ့စကားတွေက ကျွန်မကို လှောင်သလိုလို ကျွန်မကို သူဘာအဓိပ္ပါယ်နဲ့ပြောနေသလဲဆိုတာ ကျွန်မသိတယ်....။ အမှောင်ထဲမှာ ကျွန်မသူ့ကို ခပ်စူးစူးတစ်ချက်ကြည့်လိုက်မိတယ်...။
“ကဲပါ.... သူများတွေအိပ်ကုန်ကြပြီ ကျွန်တော့်ကို ရန်တွေ့ချင်ရင် မိုးလင်းမှတွေ့တော့ ဒီလိုလုပ် မျှမျှတတဖြစ်သွားအောင် အစ်မကတ၀က်ခြုံ ကျွန်တော်လဲတစ်ဝက်ခြုံထားမယ် အိုကေလား...”
ကျွန်မစိတ်တိုတိုနဲ့ သူ့ကိုမျက်စောင်းတချက်ထိုးပြီး ပြူတင်းပေါက်ဖက်ပြန်လှည့်နေလိုက်တယ်...။ အနွေးထည်နဲ့ကျွန်မကိုလာခြုံပေးပြီး သူခပ်တိုးတိုးရယ်လိုက်လို့ သူ့ရဲ့ Chewing Gem သစ်သီးရနံ့ ၀င်လေထွက်လေ နွေးနွေးလေး ကျွန်မပါးပြင်ကိုလာထိတယ်....။ ကျွန်မအိပ်ပျော်ဖို့ ကြိုးစားနေချိန်မှာပဲ သူ့ဂျာကင်ဆီက Vick ပရုတ်ဆီနံ့ရှိန်းမြမြလေးကိုရလိုက်သေးတယ်....။ ကလေးပရုတ်ဆီလေးကို သုံးနေတတ်သေးတဲ့ သူ့ကိုသဘောကျမိသွားတယ်...။
မနက်မိုးလင်းကားဂိတ်ကိုဆိုက်တော့ .... ကျွန်မတို့သွားရမယ့် တောင်ပေါ်မြို့ကလေးကို ကားတစ်ဆင့်ထပ်စီးရတယ်...။ သွားရမယ့်ခြံကို ချက်ချင်းအရောက်သွားဖို့ သီးသန့်ကားတစ်စီးကိုပဲ ငှားလိုက်တယ်....။ တောင်ပတ်လမ်းအကွေ့အကောက်တွေကို သူများတွေလို မမူးတတ်တာပဲ ကျေးဇူးတင်ရမယ်...။
သွားရမယ့်ခြံရောက်ဖို့ ထင်းရှူးပင်ကြီးကြီးတွေကို အများကြီးဖြတ်သွားရသေးတယ်....။ စတော်ဗယ်ရီစိုက်ခင်းတွေနဲ့နီးတယ်လို့ ကျွန်မသူငယ်ချင်း ပြောလိုက်သေးတယ်။ ဆယ်မိနစ်လောက်မောင်းပြီးတော့ ကျွန်မတို့သွားရမယ့် ခြံကိုရောက်ပါတယ်....။ ခြံလေးက အကျယ်ကြီးမဟုတ်ပေမယ့် အတော်အသင့် သစ်ပင်ပန်းပင်တွေနဲ့ တစ်ထပ်တိုက်ပုလေးနဲ့ နေချင့်စရာလေးပါ...။ ခြံရဲ့ မျက်စောင်းထိုးလောက်မှာ ရေကန်လေးရှိသေးတယ်...။ ကားပေါ်ကဆင်းပြီး လတ်ဆတ်တဲ့လေတွေကို တ၀ရှူလိုက်တယ်....။ ရင်ထဲကိုအေးသွားတာပဲ....။
အသင့်စောင့်နေတဲ့ ခြံစောင့်က အိမ်တံခါးလာဖွင့်ပြီး သန့်ရှင်းရေးလုပ်ပေးထားပြီးသားတဲ့...။သူက သူ့သေတ္တာရော ကျွန်မသေတ္တာပါခပ်သွက်သွက်ဆွဲပြီး အိမ်ထဲဝင်သွားတယ်....။
“မင်းခ ကိုယ့်အထုပ်ထားခဲ့ပါ .... အားနာစရာ...”
သူက အထုပ်ဆွဲရင်း ကျွန်မကိုနောက်လှည့်ကြည့်ပြီး....
“ရပါတယ် အစ်မကလဲ ....အစ်မသာ ဘယ်အခန်းမှာအိပ်မလဲ လာကြည့်ဦး”
အိမ်ထဲဝင်ဝင်ခြင်း ဘယ်ဖက်မှာ ဧည့်ခန်းလေး ....ညာဖက်က စာအုပ်စင်တွေနဲ့ စာကြည့်စားပွဲလေးတစ်ခု....။ အနောက်ဖက်မှာ အိပ်ခန်းနှစ်ခန်း ပြီးတော့ မီးဖိုချောင်နဲ့ ထမင်စားခန်း....။ ကျွန်မ မာစတာဘတ်ရွန်းကိုပဲယူလိုက်တယ်...။ သူက အိတ်တွေကို အခန်းထဲထည့်ပြီး တခါတည်းဗီဒိုတွေကိုဖွင့်ကြည့်ပြီး ပါလာတဲ့ အ၀တ်တွေကိုစီထည့်ဖို့ လုပ်နေတယ်...။
“မင်းခ နားဦးလေ အဲဒါတွေက ခနမှလုပ်လဲရသားနဲ့”
“တခါတည်းပဲလုပ်လိုက်မယ် အစ်မ ကျွန်တော်က ကျောင်းအဆောင်မှာနေကတည်းက အကျင့်ရနေပြီ”
အ၀တ်တွေခေါက်ရင်း သူက ကျွန်မကိုလှည့်ပြီး ခေါင်းညိတ်ပြတယ်....။ မီးဖိုချောင်ဖက်ဝင်သွားတော့ နို့စိမ်းရောင် ရေခဲသေတ္တာလေးတစ်လုံးကိုတွေ့လိုက်လို့ ဖွင့်ကြည့်လိုက်တယ်..။ အထဲမှာ နွားနို့နှစ်ဗူး ကြက်ဥတွေနဲ့ သစ်သီးတချို့တွေ့ရတယ်....။ မီးဖိုကိုကြည့်လိုက်တော့ လျှပ်စစ်မီဖိုလေးတစ်လုံးတွေ့တယ် ပြီးတော့ မိုက်ခရိုဝေ့တစ်လုံး...။့ တစ်ဗူးထုတ်ပြီး ဖန်ခွက်နှစ်လုံးထဲငှဲ့ထည့်လိုက်တယ်....ပြီး မိုင်ခရိုဝေ့ထဲ နှစ်မိနစ်လောက် လှည့်လိုက်တယ်....။
နွားနို့နွေးနွေးလေးနှစ်ခွက်နဲ့ ကျွန်မ ဧည့်ခန်းဖက်ထွက်လာတော့.... သူက တီရှပ်အဖြူဆွတ်ဆွတ်လေးနဲ့ အနီနဲ့အနက်ကွက် သရီးကွာတားဘောင်းဘီလေးလဲဝတ်ပြီး သူ့ အိုက်ပက်လေးကိုကလိနေတယ်...။ တကယ့်လူငယ်တစ်ယောက်ပီပီ လန်းဆန်းနေတယ်...။ ကျွန်မကိုတွေ့တော့ သူ့လက်ထဲက အိုက်ပက်လေးကိုဘေးချပြီး ချက်ချင်းထလာတယ်...။
“အစ်မကလဲ ကျွန်တော့်ကိုခေါ်လိုက်ရောပေါ့ ...ဘာလို့နှစ်ခွက်လုံးသယ်လာတာလဲ မတော်တဆမှောက်ကျမှဖြင့် အပူလောင်ကုန်မယ်”
“မဟုတ်ပါဘူး ကျွန်တော်ကစိတ်ပူတတ်လို့လေ မေမေက ငယ်ငယ်ကတည်းက အမြဲဆုံးမတတ်တာ လူအချင်းချင်း ကူညီရိုင်းပင်းဖို့ ကိုယ်ချင်းစာနာတတ်ဖို့ မုတိတာတရားပွားများတတ်ဖို့”
“မင်းအမေက သိပ်တော်တဲ့ မိခင်တစ်ယောက်ပေါ့....တစ်ခါတော့မြင်ဖူးချင်သေးတယ်..”
“ကျွန်တော့်အိုင်ပက်ထဲမှာရှိတယ်လေ ပြမယ် ခနလေး...”
သူ့အိုင်ပက်ကို လက်ချောင်းလေးတွေနဲ့ တို့ထိပြီး ပုံတွေရွေးလိုက်တယ် ...။ သူက ယောကျာ်းတန်မဲ့ လက်ချောင်းရှည်ရှည်သွယ်သွယ်လေးတွေကို ပိုင်ဆိုင်ထားတယ်...။ အနုပညာဆန်တဲ့လက်တွေ....။ ဒီလိုလက်ချောင်းပိုင်ရှင်တွေက စိတ်ထားနူးညံ့သိမ်မွေ့တတ်ကြတယ်လို့တော့ ကြားဖူးတယ်...။ သူကရော....။
“ဒီမှာလေ အစ်မ ရော့ကြည့်ကြည့်”
အဖြူရောင်ရင်ဖုံးဝတ်ထားတဲ့ သူ့မေမေဆိုသူ အမျိုးသမီးက ... တကယ်ခန့်ချောပြီး မျက်ဝန်းတွေက မိခင်တစ်ယောက်ရဲ့ အကြင်နာရိပ်တွေကိုမြင်နေရတယ်....ဘေးနားက ဆယ့်ငါးနှစ်အရွယ်ကောင်လေးက သူဖြစ်မယ်ထင်တယ်...။ ကျွန်မစိတ်ထဲ ဒီအမျိုးသမီးကြီးကို ရင်းရင်းနှီးနှီးမြင်ဖူးနေသလိုလို ....နောက်ကောင်လေးကိုရောပဲ...ဒါပေမယ့် ဘယ်မှာမြင်ဖူးသိကျွမ်းသလဲဆိုတာ စဉ်းစားမရဖြစ်နေတယ်...။ သူ့ကိုတော့မမေးကြည့်မိတော့.....။
“ဟုတ်တယ် အစ်မ အဲဒါ ကျနော် ဆယ်တန်းအောင်ပြီး နိုင်ငံခြားကို ကျောင်းသွားတက်ခါနီး မေမေနဲ့ လေဆိပ်မှာရိုက်ထားတာ”
ကျွန်မခွင့်မတောင်းမိဘဲ နောက်တစ်ပုံထပ်ကြည့်ဖို့ စခရင်ကို လက်နဲ့ရွှေ့မယ်လုပ်တော့ သူကချက်ချင်းပဲ ကျွန်မလက်ထဲက အိုက်ပက်လေးကို ယူလိုက်တယ်...။
“နောက်မှအေးဆေးကြည့်တော့လေ အစ်မ အခုနွားနို့သောက်လိုက်ဦးနော်...ရော့” ဆိုပြီး ကျွန်မကို နွားနို့ခွက် အတင်းထိုးပေးတယ်...။
ကျွန်မလဲ ယောင်နနနဲ့ သူပေးတဲ့ နွားနို့ခွက်လေးယူသောက်ရင်း သူ့မျက်နှာကိုကြည့်လိုက်တော့ ..ကျွန်မကို မချိုမချဉ်ပုံလေးနဲ့ သူရယ်ကျဲကျဲလုပ်ပြနေတယ်...။ သူ့အိုင်ပက်ထဲက ကျွန်မကြည့်ဖို့ မသင့်တော်မယ့် ပုံတွေများရှိနေလို့လားလို့ တွေးမိပြီး ရယ်ချင်သွားတယ်...။
“ဟာဗျာ...” သူကရှက်သွားသလားဘာလားတော့မပြောတတ် သူ့နားရွက်နှစ်ဖက်စလုံး သိသိသာသာ နီရဲသွားတာတော့ တွေ့လိုက်တယ်...။ ပြီးတော့ သူ့ရုပ်ကို ကျွန်မရင်းရင်းနှီးနှီး တစ်နေရာရာမှာ မြင်ဖူးသလိုပဲလို့ ခံစားလိုက်မိတယ်...။
ကျွန်မ ကိုယ်လက်သန့်ရှင်းပြီး တရေးအိပ်လိုက်တယ်...။ ကျွန်မက အခန်းထဲမှာ အိပ်မောကျနေချိန်သူက အပြင်ဧည့်ခန်းမှာ ဂိမ်းဆော့နေတယ်..။ ခရီးတလျှောက် ကားပေါ်မှာ အိပ်မရခဲ့လို့ထင်ရဲ့ အိပ်ပျော်သွားလိုက်တာ ညနေလေးနာရီမှပဲ နိုးတော့တယ်...။
ကျွန်မနိုးလာတော့ ခြံထဲထွက်ပြီး လေတွေတ၀ကြီးရှူလိုက်တယ်...။ လတ်ဆတ်လိုက်တဲ့ လေအေးတွေ....။ ဒီလိုစိမ်းမြတဲ့ လေတွေ မရှူရတာ ဘယ်လောက်ကြာနေပြီလဲ...။ သူ့ကိုမတွေ့မိလို့ ကျွန်မခြံတစ်ပတ်ပတ်ကြည့်လိုက်တယ်..။ နောက်တော့သူက မီးဖိုချောင်ထဲမှာ ညနေစာအတွက်ပြင်ဆင်နေလေရဲ့။
“အင်း...ကားပေါ်မှာ အိပ်မရတာတွေစုပြီး အိပ်ကောင်းလိုက်တာ တုံးခနဲပဲ ...”
သူက တကယ့်စားဖိုမှူးကြီးတစ်ယောက်လို ကိုယ်မှာလဲ အဖြူအနက်စင်းလေးနဲ့ ဟင်းချက်ဝတ်စုံကို ပတ်ထားသေးတယ်...။
ရေခဲသေတ္တာထဲတံခါးကိုဖွင့်ပြီး ...“ရော့ အစ်မရေမချိုးခင်... လိမ္မော်ရည်လေးသောက်လိုက်.. ခဏနားပြီးမှချိုး”
“ခြံထဲမှာစက်ဘီးလေးတစ်စီးတွေ့တယ်လေ...အဲဒါနဲ့ ဈေးထဲကနေသွားဝယ်လာတာ လုံးဝအသီးစစ်စစ် အရသာ သောက်ကြည့် သကြားမပါဘူး ကျွန်တော်ကိုယ်တိုင်ညှစ်ထားတာ”
“ဟုတ်...သိတာပေါ့ ငယ်ငယ်တုန်းက ဒီမှာ နေဖူးသေးတယ်လေ...”
ကျွန်မကတော့ သူပြောပြတာကိုနားထောင်ရင်း သူ့လက်ရာ လိမ္မော်ရည်ဖျော်ရည်ကိုလည်းသောက်ရင်းပေါ့...။
“သိပ်ကောင်းတာပဲ မင်းခက တော်တယ်.... ခုဘာချက်ဖို့ပြင်နေတာတုန်း တို့လုပ်ပါ့မယ်... မင်းအ်ိမ်ရှေ့မှာ သွားထိုင်နေပါ...”
“ရပါတယ် အစ်မက ဘေးနားက နဲနဲကူပေးပေါ့... ခု ကိုက်လန်ရွက်တွေအရမ်းနုတာရခဲ့တယ် အဲဒါကိုကြော်မယ် ခရုဆီလေးနဲ့... တိုဖူးဖြူကို ဟင်းချိုချက်မယ်လေ ၀က်ကျောရိုးနဲနဲဝယ်လာတယ် အဲဒီအရိုးပြုတ်ရည်ထဲကို တိုဖူးခပ်ပြီး တရုတ်နံနံလေးအုပ်လိုက်မယ်... ကြက်သားကုန်းဘောင်ကြော်မယ်..”
“ကောင်းလိုက်တဲ့ဟင်းတွေ...မင်းက ဘယ်လိုချက်တတ်နေလဲ နိုင်ငံခြားမှာ စားဖိုမှူးသင်တန်း တက်ခဲ့သလား”
“ဟာ...ကျွန်တော်က အာခီပါ... ဒါတွေက အိမ်မှာ မေမေလုပ်တာကူရင်းတတ်တာ..”
ဒီညနေတော့ ကျွန်မက စားဖိုမှူးအကူတစ်ယောက်ဖြစ်သွားတယ်...။ ကန်လန်ရွက်သင်ပေး...ကြက်သွန်ဖြူ ကြက်သွန်နီ ဂျင်းတွေခွာပေး လှီးပေးနဲ့ သူချက်ဖို့အဆင်သင့်ဖြစ်သွားတယ်...။ သူချက်ပြုတ်ကြော်လှော်နေတဲ့ အချိန် ကျွန်မရေသွားချိုးလိုက်တယ်....။ ကျွန်မရေချိုးပြီးထွက်လာတော့ ကုတင်ပေါ်မှာ ညအိပ်ဝတ်စုံတစ်စုံတင်ထားတာတွေ့လိုက်တယ်...။
“မင်းခ...မင်းခ ရေးမချိုးသေးဘူးလား...” ကျွန်မ မီးဖိုဖက်ကို လှမ်းပြီးအသံပေးလိုက်တယ်....။
“အစ်မ ကျွန်တော်က အိမ်ရှေ့မှာ... ချိုးမယ်လေ အစ်မပြန်ထွက်လာတာကို စောင့်နေတာ...”
“ဟုတ်ကဲ့ အစ်မထွက်လာရင် အဆင်သင့်ဝတ်အောင်လို့လေ...”
“ရပါတယ်...အိမ်မှာ မေမေ့ကိုလဲ လုပ်ပေးနေကျလေ အကျင့်ရနေပါပြီ...”
ဟင်...ဘယ်လိုကောင်လေးလည်း ...သူက မေမေ့သားလား...။ Mommy boy လား....။
Posted by coral nyo at 02:063comments:
Posted by coral nyo at 05:193comments:
Posted by coral nyo at 01:422comments:
Posted by coral nyo at 05:004comments: